UThixo Uyakulondoloza (Yobhi 34:21)
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
INQAKU ELINGUMXHOLO | NGABA UTHIXO UNOMDLA KUWE
“Amehlo akhe asezindleleni zomntu, yaye onke amanyathelo akhe uyawabona.”—YOBHI 34:21.
Ngenxa yokuba bebancinci, abantwana bafuna ukuhoywa ngumzali
ISIZATHU SOKUBA ABANYE BANGAQINISEKI: Ngokusuka kuphando lwakutshanje, igalaksi yethu iyodwa nje iqulethe izijikelezi-langa ezilikhulu leebhiliyoni. Ngenxa yolwazi ngobukhulu bendalo, abaninzi bayabuza, ‘Kutheni le nto kufuneka uMdali ongusomandla abukele abantu nezinto abazenzayo kulo mhlaba mncinci?’
OKO KUFUNDISWA LILIZWI LIKATHIXO: UThixo akasinikanga nje iBhayibhile waza waphelelwa ngumdla kuthi. Kunoko, uYehova usiqinisekisa ngelithi: “Ndiya kukucebisa iliso lam likuwe.”—INdumiso 32:8.
Cinga ngoHagare, umYiputakazi weminyaka yee-1900 ngaphambi kokuzalwa kukaYesu. UHagare wayengamthobeli umqeshi wakhe uSarayi, uSarayi yena wamgculela, waza uHagare wabalekela entlango. Ekubeni uHagare wayenze impazamo, ngaba uThixo wamcaphukela? IBhayibhile ithi: ‘Ingelosi kaYehova yamfumana.’ Loo ngelosi yamqinisekisa uHagare yathi: “UYehova uyivile inkxwaleko yakho.” Waza uHagare yena wathi kuYehova: “Wena unguThixo obonayo.”—Genesis 16:4-13.
‘UThixo obonayo,’ uyakubona nawe. Ukuzekelisa nje: Umama onothando uyabalondoloza abantwana bakhe. Ngenxa yokuba bebancinci bafuna ukuhoywa ngumzali. Ngokufanayo ke, noThixo uyasondela kuthi xa sityumkile, sibonakala singenamncedi. UYehova uthi: “Ndihlala kwindawo ephakamileyo nakwindawo engcwele, kanjalo nakotyumkileyo nonomoya othobekileyo, ukuvuselela umoya wabo bathobekileyo nokuvuselela intliziyo yabo batyumkileyo.”—Isaya 57:15.
Sekunjalo, usenokubuza ukuba: ‘UThixo undilondoloza njani? Ngaba undigweba ngokwembonakalo, okanye ujonga umntu endinguye ngaphakathi?’